China 80 * 80 * 160 CM Khulisa intente Hydroponics Indoor Garden 600D Oxford umzi-mveliso kunye nababoneleli | Virex
Intente yokukhula ye-VIREX ivimbela konke ukuphunyuka kokukhanya kwaye ihlanganiswe ne-mylar ebonakalisayo ukuphucula ukusebenza kakuhle kwemveliso nayiphi na intente yokukhula; I-Zipper ene-black lining yenza isitywina esikhanyayo esingadingi iiflaps ezongezelelweyo kunye ne-self-adhesive tape.
Ubunzima obukhulu, bomelele: umthungo ophindwe kabini ukuthintela ukukhanya; Ifakwe kwizinto ezingenayo ityhefu ye-PE, ikhuselekile kumzi-mveliso wakho, intente ixhaswa ngokukodwa ngezibonda zetsimbi ezomeleleyo zofakelo olugudileyo.
Ukuseta ngokukhawuleza: iintente zokutyala ze-VIVOSUN kulula ukuzifaka kwaye azifuni zixhobo; Ubugcisa obungenakulinganiswa kunye nezixhobo zenza iintente zokutyala ze-VIREX zibe zikhetho ezifanelekileyo kubalimi abaqeqeshiweyo.
1.Izinto eziphathekayo: Ilaphu le-oxford ye-600D, i-95% ye-reflecive mylar, ityhubhu yokupeyinta emhlophe, kunye nesixhumi se-ABS.
2.Ubungakanani: 80 * 80 * 160 cm.
3.Iimpawu: Ngeendawo zokungenisa umoya kunye neeWindows zokungenisa umoya.
Umbala Mnyama kunye nohlaza / Customized
Izinto eziphathekayo Ilaphu le-600D oxford kunye ne-mylar ekhanyayo
3.Sithembisa ukuba uya kukunika impendulo ngexesha leeyure ze-24 kwaye ufumane isisombululo kwiiyure ze-48 ezilandelayo.
Q1: Yintoni i-MOQ?
A: Ngokuqhelekileyo i-MOQ yi-30pcs, nceda uqhagamshelane neentengiso ukuba sinempahla.
I-Q2: Ngaba sinokusebenzisa i-arhente yethu yokuthumela?
A: Ewe. Siye sasebenzisana nabathumeli abaninzi. Ukuba ufuna, sinokucebisa ezinye kuwe kwaye unokuthelekisa amaxabiso kunye neenkonzo
I-Q4: Ndingayifumana njani iKhathalogu yakho kunye noluhlu lwamaxabiso?
A: Nceda usithumelele i-imeyile yakho okanye ifeksi ngolwazi lwethu lwekhathalogu kunye noluhlu lwamaxabiso.
Ngaphambili: Ukufudumeza ixesha elide Seeding Mat 48 * 20.75 Intshi PVC Material Waterproof
Okulandelayo: 150 * 150 * 200 CM Khulisa intente yokuGcina iNqanaba lokuLima ukuKhula kweHydro
I-Hydroponic Grow Tent 600 D Oxford Over 95% Refl...
Khulisa iTente yangaphakathi kwiGadi yeSitiya soMgangatho oPhezulu 120*...